म बेवकुफ थिएँ, इमरानसँग विवाह गरेँ– पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीकी पूर्वपत्नी
अंग्रेजी नाटककार विलियम कंग्रिवले सन् १६९७ मा आफ्नो नाटक ‘द मर्निङ ब्राइड’मा लेखेका थिए, ‘हेभेन ह्याज नो रेज लाइफ लव टु हेट्रेड टर्न, नर हेल अ फ्युरी लाइफ अ वुमन स्कान्ड ।’ अर्थात् एक तिरस्कृत महिलाको रिसको आगो सबै विभीषिकाहरूभन्दा बढी खतरनाक हुन्छ ।
कंग्रिवको यो लाइन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानकी दोस्री पत्नी रेहाम खानमा लागू हुन्छ । जसको आत्मकथा ‘रेहाम खान’ले भारत, पाकिस्तान र बेलायतमा तहल्का मच्चाइदियाे ।
रेहाम खानको कथा लिबियाबाट सुरु हुन्छ । जहाँ सन् १९७३ मा उनको जन्म एक पाकिस्तानी इएनटी सर्जन नयर रमजानको घरमा भएको थियो । उनका पिता आमालाई सधैं ‘डार्लिङ’ भनेर सम्बोधन गर्थे । यो नै रेहामका लागि पिताको सबैभन्दा प्रिय सम्झना हो ।
रेहाम भन्छिन्, ‘हामी अभिभावकलाई मानिस हो जस्तो सम्झन्नौं, या उनीहरू रोमान्टिक हुन सक्छन् भनेर सोच्दैनौं । धेरै दिनसम्म पिताले के भनिरहनुभएको छ भनेर हामीले बुझ्नै सकेनौं । हाम्रा लागि पिताले मातालाई ‘डार्लिङ’ भनेर सम्बोधन गर्नु थोरै ‘सकिङ’ थियो । यति मात्रै होइन, पिता जब घरमा पस्नुहुन्थ्यो तब आमालाई चुम्बन गर्नुहुन्थ्यो । पाकिस्तानी संस्कृतिका लागि यो अचम्मको कुरा थियो । पाकिस्तानमा सार्वजनिक रूपमा भावना व्यक्त गर्नु राम्रो मानिँदैन । पाकिस्तानमा मैले यस्तो नोटिस गरेकी छु । सायद भारतमा पनि यस्तै हुन्छ । मानिसहरू अरूकी श्रीमतीसँग खुलेर कुरा गर्छन् तर आफ्नी श्रीमतीलाई धेरै महत्व दिँदैनन् ।’
कन्डम लिएर स्कुल पुगिन् रेहाम
रेहामका साथीहरूले उनको नाम ‘मोर’ राखिदिए । जसको अर्थ आमा भन्ने हुन्छ । रेहाम भन्छिन्, ‘मलाई परिवार र साथीहरूले निकै परिपक्व सम्झन्थे । म अक्सर केटीहरूलाई जम्मा गरेर उनीहरूको मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक समस्याका बारेमा भाषण दिन्थें । त्यो पनि विनाकुनै संकोच । मलाई याद छ– जब म नौ कक्षामा पढ्थें, साथीहरूको अनुरोधमा म कन्डम लिएर स्कुल पुगेकी थिएँ ।’
‘मेरा पिता अफगान शरणर्थीहरूका लागि निःशुल्क मेडिकल क्याम्प सञ्चालन गर्थे । र उनको दराजमा कन्डमको ठूला ठूला कार्टुन हुन्थ्यो । हामी त्यसलाई बेलुनजसरी फुलाउँथ्यौं– त्यो पनि त्यसको महङ्खव के हो भन्ने थाहा नै नपाएको अवस्थामा ।’
‘म मानिसको नक्कल निकै राम्रोसँग गर्थें । जब म बेनजिर भुट्टोको भाषण हुबहु सुनाउँथें तब केटीहरू मेरो खिसी गर्थे । जब मैले यो कुरा आफ्नो किताबमा लेखें तब मेरा छोरीहरू पनि यो कुरामा हाँसे ।’
मात्र १९ वर्षको उमेरमा उनीभन्दा १६ वर्ष जेठो उनको फुपूको छोरा एजाज रहमानले उनीसँग बिहेको प्रस्ताव राखे । प्रस्तावलाई रेहामको आमाबुबाले पनि स्वीकार गरे । तर पहिलो दिनबाट नै यो बिहेमा खटपट सुरु भयो । रेहामले प्रायः घरेलु हिंसा सहनु पर्यो ।
रेहामका श्रीमान् उनलाई आदर्श र निपुण श्रीमती बनाउन चाहन्थे । तर उनको मनसाय रेहामलाई सधैं नियन्त्रणमा राख्नु थियो ।
१३ वर्षपछि डिभोर्स लिइन्
रेहाम भन्छिन्– ‘कसैले तपाईंलाई हात उठाउनु वा कुनै चिजले प्रहार गर्नु मात्र घरेलु हिंसा होइन । कन्ट्रोल सिचुएसनबाट घरेलु हिंसा सुरु हुन्छ । कम उमेरका महिलामाथि घरेलु हिंसा ज्यादा हुन्छ । मैले आफ्नो बिहेको पहिलो घण्टाबाट नै बुझिसकेकी थिएँ कि यहाँ केही गडबड छ ।
घरेलु हिंसामा पुरुषको वित्तीय नियन्त्रण ज्यादा चल्छ । पहिले गालीगलौज र त्यसपछि मारपिट सुरु हुन्छ । तपाईंलाई सारा गल्ती आफ्नै हो भन्ने महसुस गराइन्छ । त्यसपछि उसले तपाईंलाई बेकाम, कुरूप भन्न थाल्छ । जसको कारण तपाईंको सबै आत्मविश्वास मरेर जान्छ ।’
रेहाम भन्छिन्– ‘आफ्नो पहिलो श्रीमान्‌सँग १२ वर्ष सँगै बस्दा कुनै दिन पनि आफूलाई घरमा बसेको अनुभव भएन ।’
१३ वर्षको तीतो वैवाहिक जीवन र तीन बच्चा जन्मिएपछि रेहामले सम्बन्धविच्छेद गरिन् । त्यसपछिका केही समय उनलाई आर्थिक कठिनाइ थियो, तर मानसिक शान्ति पनि थियो ।
रेहामले पहिले लिगल टिभीमा काम सुरु गरिन् । त्यसपछि बिबिसी टेलिभिजनमा । रेहाम सम्झिन्छिन्– ‘जब मैले डिभोर्स मागें तब अदालती सारा कारबाही आफैंले सहजीकरण गरिरहेकी थिएँ । बच्चालाई श्रीमान्‌बाट बचाउने कोसिस पनि गरिरहेकी थिएँ । मसँग मात्र तीन सय रुपैयाँ थियो । मेरो सार्वजनिक खाता पनि श्रीमान्ले बन्द गरिदिएका थिए । तर मेरा लागि कदम अगाडि बढाउन ज्यादा कठिन थियो । मानिसले के भन्लान् भन्ने पनि थियो । तर, जब मैले कदम उठाए, तब मेरो यात्रा निकै सहज भयो । बच्चाहरू मुस्कुराउन सुरु गरेका थिए । उनीहरू आवाज निकालेर बोल्ने भएका थिए ।’
इमरानले एसएमएस गरेर बोलाए
अचानक रेहामले बेलायतको जागिर छोडिन् र पाकिस्तान गइन् । जहाँ उनी एक हाई प्रोफाइल टिभी एंकर बनिन् । यसबीचमा उनले इमरान खानसँग दुईपटक अन्तर्वार्ता लिने मौका पाइन् । केही दिनपछि इमरानले रेहामलाई एसएमएस गरेर भेट्न चाहेको बताए ।
केही दिन इन्कार गरेपछि रेहाम इमरानलाई भेट्न उनको घर गइन् । इमरानले रेहामसँग बिहे गर्न चाहेको प्रस्ताव राखे ।
रेहामलाई त्यो भेटको पल अझै पनि याद छ– ‘म उनीभन्दा अलि पर उभिएकी थिएँ । इमरान आफ्नो कुकुरसँग खेलिरहेका थिए । उनले मलाई आफू भएको ठाउँमा बोलाए । मलाई असहज लाग्यो किनभने मैले हाई हिल लगाएकी थिएँ । मलाई बिबिसीले भनेको थियो– तिमी जहाँ–जहाँ जाऊ, साथमा फ्ल्याट चप्पल पनि लिएर जाऊँ ।’
मैले त्यहीँ आफ्नो हिल खोलें र चप्पल लगाएर इमरानको नजिक गएँ । जब म उनको बगैंचातिर अगाडि बढेँ, तब मैले देखें– इमरानले मेरो जुत्ता उठाएर बेन्चमा राखिदिएका थिए ।’
त्यसबीचमा रमाइलो घटना पनि भयो । रेहाम इमरानको बगैंचामा बसिरहेकी थिइन् । त्यहाँ सयौं लामखुट्टेले उनलाई टोक्न थाले । इमरान अचानक झुके र रेहामको दुवै पिँडुलालाई ढाकिदिए । मानौं इमरान रेहामलाई लामखुट्टेबाट सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
रेहाम भन्छिन्– ‘म डराएर उभिएँ । यो सबै उनको छविभन्दा निकै केयरिङ र रोमान्टिक थियो । मैले सोच्नै सकिनँ यति अकड मानिस मेरो खुट्टा समाएर बसिरहेको छ । सोही भेटमा उनले मलाई बिहेको प्रस्ताव राखे । मैले आफू ४२ वर्षकी भएको बताउँदा इमरानले त्यो राम्रो कुरा भएको बताए ।’
रेहामले इमरानसँग बिहे गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । र सन् २०१४ अक्टोवरमा उनीहरूको बिहे भयो ।
इमरानको प्ले ब्वाइको सवालमा रेहामले भनिन्– ‘जब हामी कसैसँग विवाह गर्छौं तब उसको पुरानो रेकर्ड पनि हेर्छौं । तर हाम्रा अग्रजहरू भन्थे– जो मानिस विवाहभन्दा पहिले खराब चरित्र भएका मानिन्छन्, बिहेपछि उनीहरू ठीक हुन्छन् । तर यो बिलकुल गलत कुरा हो । म मेरो अनुभवका आधारमा यसो भनिरहेकी छु । यदि कोही मानिसलाई कुनै कुराको लत लाग्छ भने उसलाई बदल्न सकिँदैन ।’
‘मेरो किताबमा एक लाइन छ जसमा इमरानले मलाई भनेका छन्– बेबी ! यु कान्ट टिच एन ओल्ड डग न्यु ट्रिक । भन्नुको मतलव तपाईं जेसुकै गर्नुस्, म सुध्रनेवाला छैनँ ।’
आफ्ना पुराना प्रेमिकाको किस्सा सुनाउँथे इमरान
पहिलो दिनबाट नै रेहाम र इमरानबीच फाटो आउन सुरु भएको थियो । रेहामका अनुसार केही बाहिरी मानिस र इमरानकी पहिलो श्रीमती जमाइमा गोल्डस्मिथको असर इमरानमा बसिरहेको थियो ।
पूर्वपत्नी र प्रेमिकाको सवालमा रेहाम भन्छिन्, ‘इमरान हदभन्दा ज्यादा अरू मानिसको कुरा सुनाउँथे । इमरान आफ्ना प्रेमिकाहरूको कुरा गरेर थाक्दैनथे । जब मेरो किताब मानिसले पढे, तब केही महिलाले जो इमरानको जीवनमा आएका थिए उनीहरूले मलाई सम्पर्क गरे । उनीहरूले भने जुन किस्सा मैले किताबमा लेखें इमरानले उनीहरूलाई पनि यस्तै किस्सा सुनाएका थिए ।’
इमरानको ७० को दशकमा एक बलिउड अभिनेत्रीको किस्सा निकै भयानक थियो । र कथा साँचो पनि थियो । इमरानले रेहामलाई यो कुराको पनि पुष्टि गरेका थिए ।
रेहाम भन्छिन्– ‘इमरानले मसँग आफूलाई उक्त अभिनेत्रीसँग डर लाग्न थालेको बताएका थिए । किनकि अभिनेत्रीले लन्डनसम्म पनि इमरानलाई पच्छ्याएकी थिइन् । अभिनेत्रीका बारेमा जान्ने एक मानिसले मसँग इमरान उसको पछि लाग्ने गरेको बताएका थिए । पछि अभिनेत्रीले इमरानको नाम ठूलो तर दर्शन सानो भएको बताएकी थिइन् ।’
रेहाम याद गर्छिन्– ‘इमरान आफ्नो मनमा मेरा लागि के सोच्छन् भनेर मैले थाहा पाउन सकिनँ । हामीसँगै बसेको एक वर्षसम्म उनी मेरो तारिफ गरेर थाक्दैनथे । जब म अन्तर्वार्ता दिएर आउँथें, तब उनको तारिफले म आफैं लजाउँथें । तर मेरो पछाडि नयाँ जाल बुनिँदै थियो । इमरान त्यसको एक अंश थिए । विवाहअघि र पछि पनि उनको पार्टी चलाउने तरिकासँग मलाई गुनासो थियो । म इमरानसँग गुनासो गर्थें– पार्टीमा सधैं राम्रो राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड भएको मानिसलाई मात्र ल्याउनुपर्छ ।’
‘बिहेअघि इमरान मेरो सल्लाहामा काम गर्छु भन्थे । तर विवाहपछि जब म यो कुरा गर्थें इमरान मलाई गाली गरेर चुप गराउँथे । इमरान मसँग पार्टीको कुनै कुरा गर्दैनथे । त्यसैले म पार्टीमा हावी हुने कुनै गुन्जायस नै थिएन । केही समयपछि उनले मलाई राजनीतिको केही कुरा भए लेखेर दिनु भनेका थिए । किनकि साँझको समय उनी प्रायः संगीत सुन्थे । मलाई यो कुरा निकै अचम्म लाग्थ्यो ।’
‘रेहाम भन्छिन्– ‘साँचो कुरा के हो भने मैले अन्तिम समयसम्म पनि उनलाई सम्हाल्ने कोसिस गरें । पछि मैले बुझें– यो यथास्थितिको पार्टी हो र इमरान पनि यसलाई ठीक पार्न सक्दैनन् । धेरै वर्षपछि मैले सम्झिएँ– इमरानमा गलत काम गर्ने मानिसलाई रोक्ने हिम्मत थिएन । उनको अघिपछि जो मानिस थिए, ती सबै भ्रष्टाचारी र माफिया थिए ।’
रेहाम भन्छिन्– ‘इमरानका एक परिचित व्यक्तिले मलाई लन्डनको भेटमा पैसा अफर गरे । यो कुरा मलाई निकै अपमानजानक लाग्यो । तर इमरानमा यो कुराले कुनै असर गरेन । त्यो मानिसले दिएको पैसा नै इमरानको घरमा आउँथ्यो र त्यही पैसाले उसको घर चल्थ्यो । मैले इमरानलाई भन्ने गरेकी थिएँ– जो मानिसले आज तपाईंलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिइरहेको छ, भोलि तपाईं केही बनेपछि यही मानिस तपाईसँग पाँच करोडको आशा गर्छ ।’
केही काम गर्नुभन्दा पहिले इमरान मलाई सधैं सोध्थे । तर जब म उनलाई निलो टाई सुहाएको छ भन्थें तब उनी गुलाबी टाई लगाएर बाहिर जान्थे । अगस्टको आसपास मैले उनलाई भनेकी थिएँ, जब तपाईंलाई मैले भनेको उल्टो काम गर्नु छ भने मलाई किन सधैं सोधिरहनु हुन्छ ?’
इमरानलाई असर गर्न किताब लेखेकी हुन् ?
इमरान पाकिस्तानको नेसनल एसेम्बलीको चुनाव लडिरहेका बेला रेहामको किताब बजारमा आयो । केही हल्लाहरूमा रेहामले यो किताब इमरानलाई राजनीतिक रूपमा नोक्सान पुर्याउन लेखेकी हुन् भन्ने चर्चा पनि आयो ।
यदि उनको यो उद्देश्य थियो भने पनि उनी यसमा सफल भइनन् । इमरानले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए ।
पाकिस्ताको प्रथम महिला हुनुको पछाडि रेहामले भनिन्– ‘यस्तो मानिससँग सम्झौता गरेर बस्नु मेरा लागि सम्भव थिएन । उनले मसँग मात्र खराब व्यवहार गर्थे भने म सहन्थें, तर इमरान देशको स्वाभिमानमाथि खेलिरहेका थिए । इमरानले जुन तरिकाले मसँग विवाह गर्ने योजना बनाए, त्यो गलत थियो । म उनीसँग ‘मिसम्याच’ मानिस हुँ ।
एक राजनीतिक या प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती बन्नका लागि मेरो ‘जेनेटिक स्ट्रक्चर’ सही छैन । यदि कोही गलत काम गर्छ भने म त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दिनँ । जब सम्बन्ध टुट्यो मलाई आफंैमाथि विश्वास लागेन । म यति बेवकुफ कसरी भएँ र मैले यो मान्छेसँग विवाह गरें ?’